🥇 ▷ Philips wuxuu soo bandhigayaa nalalka cusub ee buluuga ah ee buluuga ah ✅
Philips wuxuu soo bandhigayaa nalalka cusub ee buluuga ah ee buluuga ah
Awoodda iswada ee guriga ayaa la timid wax walba, waxayna damacsan yihiin inay joogaan waqti dheer. Cilmiga aan horay ugu falanqeynay Pisapapeles, waa xirmada iftiinka ee Philips Hue.
Haddii aad seegtay falanqaynteena oo dhammaystiran, waxaad mar kale fiirin kartaa adoo galaya xiriirkan. Si kastaba ha noqotee, shirkadda ayaa soo saartay muuqaal cusub oo lagu soo dari doono Alaabadaada cusub.
Waxay u muuqatay in Philips uu soo bandhigay nalalka nalalka leh shaqooyin la mid ah kuwii ka horreeyay (tusaale ahaan, isku xirnaanta Zigbee), Waxay hadda la jaan qaadayaan isku xirnaanta Bluetooth. Sidan oo kale, Waxay leeyihiin Bluetooth-ka nooca 4.0 LE.
Thanks to this, nalalka iftiinka si toos ah ayaa looga xakamayn karaa taleefanka kasta, iyada oo aan loo baahnayn xarun dhexe. Si kastaba ha noqotee, dalab aan ka ahayn midka caadiga ah waa in loo adeegsadaa in lagu xakameeyo.
Calaamadaha cusub Philips Hue oo leh Bluetooth waxay la jaan qaadayaan kalkaaliyeyaal qaali ah sida Alexa, Siri ama Kaaliyaha Google. Sidoo kale, waxay goor dhow heli doonaan hadhka: Caddaro cadaan ah (codad cadaan ah oo u dhexeeya qabow illaa diirimaad, Cadaan (ma kala duwan yihiin codadka)) iyo Midabka.
Ugu dambeyntiina, waxaa la rajeynayaa in marka la gaaro 2020, buugga oo dhan uu la jaan qaadi doono Bluetooth.
Sidee ku saabsan ku darista Bluetooth isku-darka ambalaasyada Philips Hue?
Xigasho: Booliska Booliska Android